အနုပညာကဏ်ဍ Archives - MM Live News
အလုပျလေးနဲ့ စားရတဲ့ ပိုကျဆံက ပိုအရသာရှိပါတယျ ခိုငျးပါ လုပျနိုငျပါသေးတယျလို့ဆိုတဲ့ ဦးတိမျညှနျ့ (ရုပျ သံ)
တချိန်က ပရိသတ်တွေ ပါးစပ်မပိတ်နိုင်လောက်အောင် ဟာသတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဦးတိမ်ညွန့်ကို မသိတဲ့လူမရှိလောက်ပါဘူးနော်….ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ပျက်သွားတော့ အလုပ်အကိုင်းရှာပေးလာတာနဲ့ ကားရိုက်မရှိတော့ အိမ်မှာပဲ နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်…ကားရိုက်တွေရှိသေးရင်လည်းလုပ်ခြင်ပါသေးတ ယ်တဲ့.. “ဗေကြီးတို့ ကိုမန်းဝင်းတို့ ဆေးရုံတတက်ရတယ်။သွားချင်တာပေါ့။သွားမယ်ဆို တက္ကဆီခ ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိဘူးလေ။အနည်းဆုံးခြောက်ထောင် ခုနှစ်ထောင် အသွားအပြန်ဆို တစ်သောင်းကျော်လောက်ကုန်မယ်။အဲ့ဒါလေးက မိသားစုမှာစားမယ်ဆို မိသားစုအတွက်အထောက်အပံ့လေးဖြစ်တော့ စိတ်သာရောက်တယ် လူမရော က်ဘူး”လို့ ဦးတိမ်ညွန့်ကစိတ်မကောင်းစွာပြောပါတယ်.. Credit;… Unicode တခြိနျက ပရိသတျတှေ ပါးစပျမပိတျနိုငျလောကျအောငျ ဟာသတှကေို ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဦးတိမျညှနျ့ကို မသိတဲ့လူမရှိလောကျပါဘူးနျော….ရုပျရှငျဈေးကှကျပကျြသှားတော့ အလုပျအကိုငျးရှာပေးလာတာနဲ့ ကားရိုကျမရှိတော့ အိမျမှာပဲ နရေတယျလို့ပွောပါတယျ…ကားရိုကျတှရှေိသေးရငျလညျးလုပျခွငျပါသေးတ ယျတဲ့.. “ဗကွေီးတို့ ကိုမနျးဝငျးတို့ ဆေးရုံတတကျရတယျ။သှားခငျြတာပေါ့။သှားမယျဆို တက်ကဆီခ ကိုယျပိုငျကားမရှိဘူးလေ။အနညျးဆုံးခွောကျထောငျ ခုနှဈထောငျ အသှားအပွနျဆို တဈသောငျးကြျောလောကျကုနျမယျ။အဲ့ဒါလေးက မိသားစုမှာစားမယျဆို မိသားစုအတှကျအထောကျအပံ့လေးဖွဈတော့ စိတျသာရောကျတယျ လူမရော ကျဘူး”လို့ ဦးတိမျညှနျ့ကစိတျမကောငျးစှာပွောပါတယျ.. ရုပျသံကွညျ့ရနျ […]
ခုခတျေ ငပေါတှေ ငမျးငမျးတကျလိုခငျြနကွေတဲ့ အကယျဒမီကို ငွငျးခဲ့တဲ့ သင်ျကွနျမိုးဇာတျကားထဲက နှဈကိုယျတူခဈြသမြှကို သီခငျြးရေးဆရာကွီး.
February 19, 2020 MM Live News
သင်္ကြန်မိုးဇာတ်ကားထဲက နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှကို သီချင်းရေးဆရာကြီးပါ.. ခုခေတ် ငပေါတွေ ငမ်းငမ်းတက်လိုချင်နေကြတဲ့ အကယ်ဒမီကို ငြင်းခဲ့တဲ့သူပါ ၂၀၁၅ သင်္ကြန်နားနီး သူ့ကို အများအလှူငွေ ငွေရှစ်သိန်းရယ် အင်္ကျီပုဆိုးတွေရယ် သွားလှူတော့ သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပါ … တမြန်နှစ်သင်္ကြန်နားနီးကတခါ မြို့မတီးဝိုင်းရုံးမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ငွေနဲ့ အင်္ကျီပုဆိုး သွားလှူခဲ့သေးတယ် စာစီတာကတော့ သူများဟာယူလာတယ်….. ဂီတပညာရှင် တေးရေး / ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ / ကင်မရာမင်း / မြို့မကိုပေါ ဘဘ ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကား ကို ဒါရိုက်တာဆု ပေးတာကိုဘာလို့ ငြင်းခဲ့တာလဲ ဘဘ… ၁၉၆၁ ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီပူးတွဲဦးလူကလေးနဲ့ပူးတွဲပေးအပ်ခံရတုန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီ ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို ဆုပေးတော့ ကျွန်တော် မေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇာတ်ကား ဘယ်နေရာ ကောင်းကွက်ကို ပေးကြတာလဲ ပေါ့ဗျာ။ […]
ရုပျရှငျရိုကျရငျး ရဲစခနျးကချေါယူသတိပေးခွငျးခံရတဲ့ကိုပေါကျ …
January 22, 2020 MM Live
ကိုပေါက်ကေ တာ့ ခပ်မိုက်မိုက်သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူညီခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရုပ်ရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်လာခဲ့တာပါ။ သူနောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ ရိုးမပေါ်ကျတဲ့မျက်ရည် ဇာတ်ကားကြီးဟာဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့လက်ရာတွေထဲက အကောင်းဆုံးတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ကိုပေါက်ကတော့ (၂၀၂၀)နှစ်သစ်မှာလည်း ပထမဆုံးဇာတ်ကားအနေနဲ့ အိပ်မက်မြစ်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကတော့ ရိုက်ကွင်းတစ်ခုကြောင့် ရဲစခန်းရိုက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို “ပြည်သူကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင် ဆူပူမှုတဲ့… ရိုက်ကွင်းမှာ မီးရှူးမီးပန်းဖောက်လို့ နောက်မလုပ်ဖို့ စခန်းခေါ်ပြီးခံဝန်ထိုးရတာ..ည တစ်နာရီခွဲမှ ပြန်ရတယ်” လို့ ရေးသားခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကတော့ စိုးရိမ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်ကတော့ မနေ့ညကရဲစခန်းရောက်ခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး “ရဲစခန်းရောက်သွားတဲ့ည .. အခုထိမပြန်ရသေးတဲ့ ည….ည ဟာ အသက်ရှူမှားနေတယ်” လို့လည်း သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်စ်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုပေါက်ကတော့ အရင်ရက်ကပဲ စင်ကာပူခရီးစဉ်မှာ ပတ်စပို့သက်တမ်းမပြည့်တော့လို့ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အခုလည်းရဲစခန်းထပ်ရောက်ခဲ့ပြန်တာပါ။တလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ကိုပေါက်အတွက် ပရိသတ်ကြီးက အားပေးစကားလေးပြောခဲ့ပါဦးနော်…..။ Cele Crazy unicode […]
”အဝတျမဲ့ ပုံတှေ ပြံ့နှံ့သှားအောငျ ရကျစကျလိမျ့မယျလို့ နဒှေေးကို မထငျခဲ့ဘူးလို့ ပွောလိုကျတဲ့ သံစဉျမောငျ”
January 19, 2020 MM Live
သရုပ်ဆောင်မင်းသားနေဒွေးကတော့ မင်းခန့်ကျော်နဲ့ ငွေကြေးကိစ္စ ပြဿနာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ချစ်သူဟောင်းဖြစ်သူ မော်ဒယ်သံစဉ်မောင်နဲ့ပါ လူမှုရေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရတာပါ….. မော်ဒယ် သံစဉ်မောင်ဟာ နေဒွေးရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို မခံနိုင်တဲ့ အဆုံးမှာ ရည်းစားဟောင်းရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့် အနာတရဖြစ်ခဲ့ပုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာတင်လာခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြီးအကျယ်ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်….. အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ မော်ဒယ်သံစဉ်မောင်ရဲ့ အဝတ်မဲ့ပုံတွေဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့ လာခဲ့ပြီး ဒီပုံတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ သံစဉ်မောင်က မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးပြုလုပ်ကာ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တာပါ….. သံစဉ်မောင်က ဒီလိုမျိုးပုံတွေကထွက်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့ နှစ်ယောက်တာပတ်သတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာမှာသူဒီလောက်ထိညီမအပေါ် ရက်စက်လိမ့်မယ်လို့လည်း ညီမမထင်ဘူး။ ဘယ်လောက်ထိသူငြင်းခဲ့သည်ရှိအုန်း ဒါ ညီမနဲ့သူနဲ့ကအသိဆုံးလေညီမသူ့ကို ယုံကြည်မှုတစ်ခုထားထားတာ ညီမကိုသူဒီလောက်ထိလုပ်ရလောက်အောင်အထိ ညီမ မတွေးနိုင်ဘူး။ မတွေးရဲဘူးပေါ လို့ဝမ်းနည်းစွာထုတ်ပြောလာခဲ့တာပါ။သံစဉ်မောင်ကအဆုံးသတ်မှာသူမအနေနဲ့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ နေဒွေးဆီက ထိုက်သင့်တာတစ်ခုပြန်ယူသွားမယ်လို့လည်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာပွဲဆူနေပြီး လူပြောများနေတဲ့သတင်းလေးမို့လို့ရွှေရောင်လမ်းပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ Writer – Magic (Shwe […]
မယျလိုဒီပွောတဲ့ လှတဲ့မိနျးမတှေ လငျကံမကောငျးဘူး
January 18, 2020 MM Live
လှတဲ့မိနျးမတှကေ ယောကျြားကံမကောငျးဘူးလို့ ဒဲ့ပွောလာတဲ့ မယျလိုဒီ ရုပျရှငျနှငျ့ဗီဒီယို သရုပျဆောငျ မယျလိုဒီဟာ လှပကွညျလငျတဲ့ မကျြနှာလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ကိုရီးယားမငျးသမီးလေးလို လှပတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝ ရရှိထားသူပါ။ မယျလိုဒီက အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျး သူမရဲ့သားလေး သိဒ်ဒိစဈကို ပိုပွီးအခြိနျပေးနရေတာကွောငျ့ အနုပညာလုပျငနျးတှေ အရငျလောကျ အမြားကွီး မလုပျကိုငျတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပရိသတျတှကေ မယျလိုဒီရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို အားပေးနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။ မယျလိုဒီက သူမရဲ့ စိတျထဲရှိတာကို ဟနျမဆောငျပဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုနထေိုငျတတျတဲ့ စရိုကျရှိတာကိုလညျး ပရိသတျကွီးလညျး သိပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး မယျလိုဒီက “လှတဲ့မိနျးမတှေ လငျကံမကောငျးဘူး။ ဒဲ့ဘဲ့။ အနာရှိစပျကွ” ဆိုပွီး စာသားကို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝထေားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မယျလိုဒီက လကျရှိမှာတော့ […]
”မိခငျဖွဈသူ ရနျကုနျမွို့ကို အလညျလာတုနျး ရရှိလာတဲ့ အနုပညာကွေးလေးနဲ့ ရှဆှေဲကွိုးကွီး ဝယျကနျတော့ခဲ့တဲ့ ခွိမျ့ကကေို”
မိခင်ဖြစ်သူ ရန်ကုန်မြို့ကို အလည်လာတုန်း ရွှေဆွဲကြိုးကြီးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော် Bananna Fb Cele အဆိုတော် (ငှက်ပျောသီး )ခြိမ့်ကေကိုက သူရရှိထားတဲ့အနုပညာကြေးလေးတွေစုပြီး မိခင်ဖြစ်သူ ရန်ကုန်မြို့ကို အလည်လာတုန်း ရွှေဆွဲကြိုးကြီးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုလို မိခင်ဖြစ်သူကိုလက်ဆောင် ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း သူ့အနေနဲ့ အရမ်းပျော်မိသလို သူ့ရဲ့မိခင်ကလည်း ပီတိဖြစ်ကာ မျက်ရည်ကျခဲ့ပါတယ်။Chaink K Ko’Fb Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် မိခငျဖွဈသူ ရနျကုနျမွို့ကို အလညျလာတုနျး ရှဆှေဲကွိုးကွီးလကျဆောငျဝယျပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတျော Bananna Fb Cele အဆိုတျော (ငှကျပြောသီး )ခွိမျ့ကကေိုက သူရရှိထားတဲ့အနုပညာကွေးလေးတှစေုပွီး မိခငျဖွဈသူ ရနျကုနျမွို့ကို အလညျလာတုနျး ရှဆှေဲကွိုးကွီးလကျဆောငျဝယျပေးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ အခုလို မိခငျဖွဈသူကိုလကျဆောငျ ပေးခှငျ့ရတဲ့အတှကျလညျး သူ့အနနေဲ့ အရမျးပြျောမိသလို သူ့ရဲ့မိခငျကလညျး ပီတိဖွဈကာ မကျြရညျကခြဲ့ပါတယျ။Chaink K Ko’Fb
ကိုဗလေုဝ လူနာမညျတော့ သိပျမမှတျမိတော့…ဘယျသူ့နာမညျကို မေးမေး နတေိုး နတေိုးလို့ပဲ ဖွပေါတယျ…
January 12, 2020 MM Live
ကိုဗေ #စကားကောင်းကောင်း မပြောနိုင်သေးတာက လွဲရင် ခြေလက်အားလုံး လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ လူနာမည်တော့ သိပ် မမှတ်မိသေးပါ။ ကျနော့်ကို မှတ်မိလား မေးတော့ ခေါင်းညိတ်ပြပြီး နေတိုး နေတိုး လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ဘယ်သူ့နာမည်ကို မေးမေး နေတိုးလို့ပဲ ဖြေပါတယ်။ သူ့ဘာသာ အိမ်သာသွားနိုင်ပေမဲ့ လူတွဲပေးထားရပါတယ်။သွေးပေါင်ချိန် ၁၃၀း၇၀ ရှိနေပါတယ်။ တစ်ပတ်လောက် စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ ဆေးရုံက ပြောပါတယ်။ ဆန်ပြုတ် သောက်နိုင်ပါတယ်။လှဲအိပ်ချင်နေပါတယ်။ဧည့်သည်တွေ လာလာမေးနေကြလို့ အနည်းငယ် ပင်ပန်းနေပုံရပါတယ်။ သူ့ပရိတ်သတ်များ မစိုးရိမ်ကြဖို့ သူ့ဇနီး မစုက ပြောပါတယ်။ ကိုဗေ ကျန်းမာလာစေကြောင်း ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ…..။မိုး ပွင့် unicode ကိုဗေ #စကားကောငျးကောငျး မပွောနိုငျသေးတာက လှဲရငျ ခွလေကျအားလုံး လှုပျရှားနိုငျပါတယျ။ လူနာမညျတော့ သိပျ မမှတျမိသေးပါ။ […]
ဟာသသရုပျဆောငျ ဗလေုဝ ပငျလုံဆေးရုံမှာ ဆေးရုံတကျနရေကွောငျး သိရ…
ဟာသသရုပ်ဆောင် ဗေလုဝ ပင်လုံဆေးရုံမှာ ဆေးရုံတက်နေရကြောင်း သိရပါတယ် မနေ့က ရန်ကုန်မှာ ဦးနှောက်တွင်းသွေးခဲပြီး ဆေးရုံတက်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ လမ်းလျှောက်စ ပြုနေပေမယ့် အသိမှတ်ဉာဏ်တွေအလုပ်မလုပ်သေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ အမြန်ပြန်လည်ကောင်းပါစေ…။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်တဲ့နေရာမှာ အားကိုးရတဲ့ စစ်သူကြီးလို့အမေ ကိုယ်တိုင် ချီးကျူးခဲ့ရတဲ့ ဦးဗေကြီး (ခ)အကယ်ဒမီ ဗေလုဝ ဦးနှောက်သွေးခဲရောဂါကြောင့် ပင်လုံဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ ပင်လုံဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဗေလုဝထံသို့ ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကသရုပ်ဆောင်ခင်မို့မို့အေးက ကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းမေးခဲ့ပြီး အနုပညာမောင်နှမအချို့လည်း သတင်းမေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်သူကြီး ဦးဗေ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကျန်းမာပါစေ….။ Source: Akonthi ပရိသတ်ကြီးရေ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဗေလုဝ အတွက် ဆုတောင်းစကားလေးပြောပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…. unicode ဟာသသရုပျဆောငျ ဗလေုဝ ပငျလုံဆေးရုံမှာ ဆေးရုံတကျနရေကွောငျး သိရပါတယျ… […]
လူမှုကှနျရကျမှာ တဟုနျထိုးနာမညျကွီးလာတဲ့ တကျသဈစမျောဒယျမလေး မသေကျပိုငျရဲ့ အသားကုနျဘုဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ ရပေနျးစားနေ
လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်တဟုန်ထိုးကြီးလာတဲ့ အသားကုန်ဘုဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ရေပန်းစားနေ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ မှာတော့ ဖွဘုတ်ပေါ် အရှိန်တဟုန်တိုး ပြန်နှံ့ နာမည်ကြီးလားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေး ကတော့ တက်သစ်စမော်ဒယ်မလေး မေသက်ပိုင်ရဲ့ အသားကုန်ဘု ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေသက်ပိုင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရင် သူမ၏ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ တရားဝင် ပြောပြထားတာပါ။ တက်သစ်စမော်ဒယ်မလေး မေသက်ပိုင်ဟာဆိုရင် မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သလို အဆိုတော် တစ်ယောက် အဖြစ်လဲ နာမည်ကြီး လူသိ များသူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ MTV လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အသားကုန်ဘု ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်လန်းလန်း ခပ်ဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဘယ်လို […]
December 7, 2019 MM Live
ပရိသတ်တွေရဲ့ မဲပေးမှုနဲ့ ဆယ်လီစုံထောက်များရဲ့ ရွေးချယ်မှုကြောင့် မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြလိုက်ရတဲ့ The Mask Singer ပြိုင်ပွဲကြီးမှ ယက္ခ့မျက်နှာဖုံးရှင်မှ ချွတ်ချခဲ့ရပြီး ပိုင်ရှင်ကတော့ ကိုကျော်ထူး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယက္ခမျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ကတော့ နိုင်ငံကျော်ဝါရင့်စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ “ညမွေးပန်း” သီချင်းသီဆိုခဲ့ပြီး စုံထောက်တွေဖြစ်တဲ့ ရတနာမိုင်က ဗေလုဝ၊ခိုင်သင်းကြည်က အိစီကွေး၊ ထွန်းထွန်းက ဟဲဗီဖြိုး၊ဦးအရိုင်းက ဒေါ်ထားလို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်…..။ ယနေ့ညမှာတော့ The Mask Singer ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Group C ဖြစ်တဲ့ ဖိုးဝ၊ နံနတ်သီး၊ ယက္ခတို့ကယှဉ်ပြိုင်သီဆိုခဲ့တာဖြစ်ကာ “ဖိုးဝ” မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ကတော့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် Rဇာနည်ရဲ့ အသည်းကွဲမြို့တော် သီချင်းနဲ့ သီဆိုခဲ့ပြီး ဆယ်လီစုံထောက်တွေဖြစ်တဲ့ ရတနာမိုင်နဲ့ ခိုင်သင်းကြည့်ကတော့ နိုင်ငံကျော်မင်းသားချော ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ဦးအရိုင်းနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့ကတော့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရဲလေးလို့ […]